कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सीन लगाउने पहिलो भाग्यमानी नेपाली, जस्को लक्की ड्रमा नाम थियो…को हुन त उहाँ हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सीन लगाउने पहिलो भाग्यमानी नेपाली, जस्को लक्की ड्रमा नाम थियो…को हुन त उहाँ हेर्नुहोस् ।
एजेन्सी ; को’रोना भा’इरस अर्थात कोभिड-१९ बि’रुद्धको खोप लगाउने सौभाग्य एक नेपालीले पनि पाएका छन् । शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुबीच को’रोना बि’रुद्धको औषधि बिकास गर्न प्रति’स्पर्धा चलिरहेको बेला रुसमा रहेका एक नेपालीले भने
यसबिरु’द्धको भ्या’क्सिन लगाउने अवसर पाउनुभएकाे हाे ।
रुसले कोरोना भा’इरस बि’रुद्धको औषधि निर्माण गरिसकेको दावी गर्दै आम रुपमा भ्या’क्सीन दिँदै आएको छ । सोही क्रममा विश्वमै पहिलो पटक निर्माण भएको कोरोना भाइरस बिरुद्धको भ्याक्सीन रुसमा कार्यरत डा. महेश श्रेष्ठले पाउनुभएको हो ।
श्रेष्ठ रुसको मस्कोस्थित कार्यरत नेपाली मुलका डाक्टर हुनुहुन्छ । उहाँ सल्यानमा जन्मिनु भएको थियो । ६१ वर्षीय डाक्टर श्रेष्ठले शनिबार कोराना भा’इरसबि’रुद्धको खोप लगाउनुभएको हो । उहाँले लक्की ड्र’मा नाम परेपछि को’रोना भा’इरस बि’रुद्धको औ’षधि लगाउने अवसर पाउनु भएको हो ।
श्रेष्ठको नाम रसियन सरकारद्वा’रा अनलाइनमा लक्की ड्र गर्दा छानिएको थियो । उहाँले भ्यासीन लगाउनुभएको बारे गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले पु’ष्टी गर्नुभएको छ ।
भ्या’क्सीन लगाएपछि डाक्टर श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ । काे’राेना भाइ’रस बिरु’द्धको औष’धि निर्माण गर्न चीन, अमेरिका, भारत र बेलायत जस्ता सम्पन्न मुलुकहरू लागी परिरहेका छन् ।
Prevकुलमानको पुन: नियुक्तिको माग गर्दै अमेरिकामा वि’रोध प्रदर्शन…हेर्नुहोस् । तुरुन्तै नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेले सेयर गर्नुहोस् ।
Nextचिनियाँ राष्ट्रपति सी भन्नुहुन्छ : नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको विकास आफ्नो उच्च महत्वमा छ…हेर्नुहोस् ।
एउटै ब्यक्तिको २१ जना छोरा छोरी, सीडीओसहित सरकारी जागिरे मात्रै ९ जना !